I-ESTA AMERICA ISICELO - I-ESTAmerica I-ESTA E-Filing Services Traveling
I-VISA INKQUBO YENKQUBO (VWP)
HLOLA I-ESTA STATUS
I-ESTA Visa Waiver Programme
Iifayile ze-PASSPORT IiFayile
ISICWANGCISO SE-ELECTRONIC ISICWANGCISO SOKUHLAWULWA KWAMASEBENZI
ISICELO ESISHA HLOLA ISICELO ESIFUNDWAYO
Ngaba ufuna uncedo lokuqalisa?
E-FILING INTSHA ESTA VISA WAIVER
Abafanelekayo abahamba ngelizwe ngamazwe abafisa ukuhamba e-United States phantsi kwe-Visa Waiver Programme kufuneka bafake isicelo sokugunyazwa.
Abafanelekayo abahlali okanye abahlali:
Ungummi okanye uvumelekile wesizwe selizwe le-Visa Waiver Programme.
Uhambo lwakho luya kwiintsuku ze-90 okanye ngaphantsi.
Uceba ukuhamba eUnited States kumashishini okanye ukuzonwabisa.
Okwamanje awunayo i-visa ye-visa.
Ziziphi iinkcukacha ezifunekayo:
Ipasipoti evumelekileyo esuka kwi-Visa Waiver Country yelizwe
Ikhadi lesikweledu elivumelekileyo (MasterCard, VISA, American Express, kwaye Qaphela ukuhlawula i-$ 89 ngemali yesicelo.
Ulwazi lwakho loqhagamshelwano. (Igama, inombolo yefowuni, idilesi yokuthumela, nekheli le-imeyili)
Idilesi kunye nolwazi lokudibanisa lokuhlala kwakho.
Yintoni endiyidingayo ukuyifaka isicelo se-ESTA?
Uzakufuna ipasipoti yakho kunye nekhadi lokukhokha ukuthumela isicelo. Uhambo lwakho lokuhamba lukhethwa ngokukhethekileyo ukungenisa kodwa lungabandakanywa. Nceda ubuyekeze i-FAQ yethu imibuzo eqhelekileyo kunye nezimpendulo malunga nawe Isimo se-ESTA
Iintlawulo ezenzelwe isicelo se-ESTA. ,
Zonke iintlawulo ze-ESTA kufuneka zizaliswe ngekhadi lekhredithi okanye kwi-debit card. Urhulumente waseUnited States akayikuhlola ngaphandle okanye iilawutyala zemali kwisicelo se-ESTA, kwaye uyishiya kwiinkampani ezikhethekileyo njenge-ESTAmerica.org ukunceda "Inkqubo ye-elekthroniki yokuGunyazisa uhambo"Inkqubo. Siyamkela zonke iimpawu zamakhadi amakhulu. Nceda uqhagamshelane nathi ukuba awukwazi ukwenza inkokhelo ngekhadi lesikweletu, kodwa indlela elula kakhulu inekhredithi okanye ikhadi lokutsalwa.
Qinisekisa isicelo sakho se-ESTA
Ngaba ufuna ukuhlaziya, ukuqinisekisa okanye ukuvuselela i-ESTA yakho?
Kukho imimandla ethile engahlaziywa kwi-ESTA emva kokuba ufumene imvume yokuhamba evumelekileyo. Unconywa kakhulu ukuba ubuyekeze kakuhle kakuhle i-ESTA ngaphambi kohambo lwakho ukuya eUnited States ukuzinika ixesha xa kukho impazamo ngesicelo sakho. Ukuba unemibuzo malunga Nokungeniswa, nceda usithumelele ngeposi.
Ngaba iVisa kunye ne-ESTA into efanayo?
Ukugunyaziswa kwe-ESTA ayikho i-visa. Kuyi-pre-clearance ukuhamba phantsi kwe-VWP, eyenzelwe ukuvumela abahambi ukuba bangaphaya kwenkqubo yokuthengisa i-visa. I Ugunyaziso lwe-ESTA ayifanani ne-visa yase-United States nayiphi na indlela, kwaye ayikwazi ukutshintshwa kwi-visa kwiimeko apho kufuneka i-visa yokuhamba. Awudingi i-ESTA ukuba sele unayo i-visa evumelekileyo.
I-ESTA kunye ne-VWP Information
Izicelo ze-ESTA zenziwa kwikhompyutha kuphela.
Iinkcukacha zezicelo ze-Vital ziquka ipasipoti kunye nolwazi lokuhlawula. Uhambo lwakho lokuhamba lukhetho kwaye lunokuhlaziywa kamva. Zonke iindawo ezifunekayo kufuneka zizaliswe kwaye zizaliswe ngokuchanekileyo. I-United States ayifaki iitsheki okanye i-oda ze-akhawunti ye-ESTA. Ishiywe kwiinkampani ezinjenge-ESTAmerica.org ukunceda nokubanceda abemi belizwe lakho bazalise ifom ngokuchanekileyo.
Ngubani ofuna ukufaka isicelo kwi-ESTA?
Nabani ongena eUnited States phantsi kwe-Visa Waiver Programme. Oku kuvumela iSebe lezoKhuseleko lwaseKhaya ukuba livumeleke ngaphambili abahambi baVisa Waiver ngaphambi kokuba bahambe kumazwe abo. Khetha kuphela Amazwe aMazwe okuHlola amaVisa, kwaye uya kufumana ololuhlu ngaphasi kweThe (VWC) iphepha.
Isicelo esitsha se-ESTA
Bonke abahamba ngee-Visa Waiver amazwe banelungelo lokufaka isicelo
I-ESTA ingafumaneka kuphela kwi-intanethi
Kuthatha ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 ukugqiba isicelo
Ixesha lee-72 lokucwangcisa ixesha okanye ngaphantsi
Ukuhlaziywa kwesicelo se-ESTA
Hlaziya idilesi yokuhlala kwi-US
Hlaziya idilesi ye-imeyile esebenzayo kwisicelo sakho se-ESTA
Qinisekisa isicelo se-Esta
Hlola usuku lwakho lokuphela kwe-ESTA
Qinisekisa iinkcukacha zakho ze-ESTA kakuhle phambi kokuhamba
Hlaziya iipaspoti zakho zangoku
Ukuhlaziya nayiphi na idatha yesicelo esitsha, ukuba kuyimfuneko
I-ESTA E-Filing I-Visa Waiver Travel System.
I-10 Minute Isicelo
24 / 7 Uxhaso lwabathengi. Xoxa ngeNkxaso yeKhenketho ehambayo ehambayo namhlanje.
Ukuba isicelo sakho sokuhamba asivunyelwanga, sinikeza i-100% Imbuyiselo yeMbuyiselo yeMali.
Ngubani ovumelekileyo ukuhamba nge-United States?
Ukutyelela abathandiweyo, okanye ukuza kwiholide eMelika? Kufuneka ufumane imvume egunyazisiweyo kwi-Government of United States ngaphambi kokungena kweli lizwe. Kwezinye iimeko, oku kuthetha ukufaka isicelo se-visa kodwa ukuba ungummi welizwe elifakwe kwi-Visa Waiver Programme (VWP), usebenzisa i-Electronic System yokuGunyazisa ukuThuthwa kwePhondo (i-ESTA) ingaba yindlela elula kwaye ekhawulezayo. I-VWP ivumela abemi bamazwe e-38 ukuba bafumane imvume yokuhamba e-United States ngokusebenzisa isebe lase-United States loKhuselo lwaseKhaya ngaphandle kokufumana i-visa passort. Ukuba ngoku ungummi onamazwe athathe inxaxheba kwaye unepasipoti evumelekileyo, kufuneka usebenzise kuphela ifomu le-ESTA. Ukuba ufanelekile, uya kuba negunya lokuba uhambe nge-US kwiintsuku ze-90. Ukuba uhamba eUnited States endleleni yakho ukuya kwelinye ilizwe, usadinga ukufaka isicelo se-ESTA.
Isicelo seViyutha yeVisa. Isicelo se-ESTA.
Iimfuno ze-EST phantsi kwe-VWP ye-Visa Waiver Programme ayimfuneko kakhulu kunezo zicelo zekhompyutha ezingabonakaliyo. Isicelo seVisa sidinga malunga neyure enye okanye ixesha elide ukuzalisa yonke inkcazelo yokuhamba kunye neembali malunga nawe. Vs. isicelo se-ESTA malunga nemizuzu ye-10.
Iinjongo zokuhamba xa usebenzisa isicelo se-ESTA
Xa ufaka isicelo se-ESTA, isetyenziswe ekuboneni abathandekayo, ukuvakasha iholide, ukutyelela ugqirha, kunye nokufanelekileyo kweendlela ezininzi zezoshishino ukuya eUnited States of America. Ezinye iinjongo zokuhamba ziyamkelwa, ngelixa ezinye zifuna isicelo seVisa esipheleleyo.
UkuKhenketho, ukuKhenketha, kunye neSayithi
Iimpapasho zeeNgcaciso zePakethi
Abathandekayo bokutyelela okanye abahlobo
Iikholeji zokutyelela ngaphambi kokufaka isicelo seVisa ukuya kuzo
Unyango lwezoNyango kunye noTyelelo loTyelelo
Iziganeko zentlalo, ii-Concerts, okanye iindibano zeenkonzo zenkampani
Ukuthatha inxaxheba kumdlalo, umculo, ezemidlalo, okanye nayiphi na enye inhlobo yemincintiswano okanye imicimbi, (ayikwazi ukuhlawulwa ukuthatha inxaxheba)!
Uqhagamshelwano loshishino kunye neentlanganiso zezoshishino
Ukuthatha inxaxheba kwimfundo, inkomfa yengcali, okanye nayiphi na indibano. Umzekelo iComic Con
Uqeqesho olufutshane lwexesha elifutshane (Awukwazi ukuhlawulwa nayiphi na imithombo e-USA ngaphandle kweendleko zokuhlala kwakho)!
Izicelo zeVisa zifuneka ukuba zihambele eUnited States of America ukuba:
Umsebenzi wexesha elipheleleyo
Ixesha elide-leMfundo leMfundo, iKholeji, okanye iKholeji yobuGcisa
Nayiphi na intatheli yasemzini, cinezela, ifilimu, umsakazo okanye ezinye iindaba zolwazi
Ukufuna indawo yokuhlala ngokusisigxina e-United States of America
Ngaba ufuna i-ESTA Ukuhamba nge-USA?
Ukuba ummi ongeyena wase-US uyadlula ngokukhawuleza nangokuqhubekayokuhamba le eunited States, yena unokufuna ukuhamba ngokusemthethweni I-C-1 visa, ngaphandle kokuba yena ungummi welizwe elinesivumelwano kunye eunited States ukuvumela abemi babo ukuba bahambe eunited States ngaphandle ivisa .
Ngaba ndifuna i-visa ngokudibanisa indiza e-USA?
Iunited States ISebe lezoKhuseleko lwaseKhaya lifuna ivisa I-Waiver Program (VWP) abahambi ukufumana imvume evela Inkqubo ye-elekthroniki yokuVunyelwa kweeNdwendwe (i-ESTA) ubuncinane iiyure ze-72 ngaphambi kokungena ye ukubaleka kwi-US okanye ukuxhuma kwi-US I-ESTA iyadingeka.
Ngaba ndifuna i-visa ukuba ndibe ne-layover e-USA?
Ukuhamba ngokukhawuleza nangokuqhubekayo kuthetha ukuba uhambo lwakho lokuya kwindawo yokugqibela luquka i-layover eUnited States kwaye kuya kufuneka uyeke apho, kodwa akanayo amanye amalungelo. ... Nangona kunjalo, ukuba usenayo i-v-1 okanye iB-2 visa yase-US, kwaye kufuneka uhambe ngelizwe, awudingi i-visa ye-C.
Ziziphi iilizwe ezifuna i-ESTA E-Passports kwi-USA?
Abavakatyeki bangahlala kwiintsuku ze-90 eUnited States kuquka ixesha elichithwa eCanada, eMexico, eBermda, okanye kwiziqithi zaseCaribbean ukuba ukufika kwakuse-United States. I-ESTA iyadingeka ukuba ifike ngomoya okanye iinqanawa zokuhamba. I-Visa Waiver isebenza ngaphandle kwe-ESTA ukuwela umda, kodwa i-VWP ayisebenzisi nantoni (okokuthi i-visa iyadingeka) ukuba umgibeli ufika ngomoya okanye ulwandle kwi-carrier engavumelekanga.
Ukususela kwi2016, i i-visa waiver ayisebenzisi kwiimeko apho umntu ngaphambili waya e-Iran, e-Iraq, eLibya, eSomalia, eSudan, eSiriya, okanye eYemen emva okanye emva kwe-Matshi 1, 2011 okanye abo bahlali base-Iran, i-Iraq, iSudan okanye iSiriya. Ezinye iindidi ezinjengediplomats, ezomkhosi, intatheli, abasebenzi basebenzi okanye abashishini abasemthethweni banokuba neemfuno zabo ze-visa zisuswe nguNobhala woKhuseleko lwaseKhaya.
Amazwe atyunjweyo kunye neendlela.
Amazwe angatyunjwa ukuba afumane isikhundla kwiNkqubo yoLungiselelo lweVisa ziphakathi "kwemeko yendlela" kunye nokufaneleka ukuthatha inxaxheba. Ukutyunjwa kuqalise uvavanyo olusisiseko I-United States Isebe loKhuseleko lwaseKhaya yezokhuseleko zelizwe lokutyunjwa kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe. Akukho sikhokelo esilungisiweyo sokuba ilizwe lihlale liluhlu olukhethiweyo ngaphambi kokuba luvunywe okanye lukhishwe kwiprogram.
Ukususela kwi-2005, iSebe le-Rhulumente wase-United States liqhuba iingxoxo kunye namazwe abizwa ngokuba "ngamazwe emephu yendlela," enomdla wokujoyina (okanye ukujoyina) i-VWP. Kwimihlaba yasekuqaleni ye-19, i-10 iye yamkelwa kwi-VWP.
Ulungelelwaniso lokukhishwa kwe-visa lungasuswa nanini na. Oku kunokwenzeka ukuba iUnited States ikholelwa ukuba abemi belizwe elithile banakho amathuba kunokuba baphule iimingcele zabo ze-VWP, njengokusebenza ngaphandle kwemvume okanye ukugqithisa ixesha labo lokuhlala eMelika. Ngoko ke, Argentinaukuthatha inxaxheba kwi-VWP kwagqitywa kwi-2002 ngenxa yeengxaki zemali ezenzekayo kweli lizwe kunye nefuthe layo elinokubakho ekufudukeni kwamanani kunye nokungabikho komthetho kwabemi bayo e-United States ngendlela ye-VWP. Uruguayukuthatha inxaxheba kule nkqubo kwachithwa kwi-2003 ngezizathu ezifanayo. Nangona ukuma kwezopolitiko nezoqoqosho kwelizwe kungaboni ngokuthe ngqo ukufaneleka kwayo, kukholelwa ngokubanzi ukuba izakhamuzi zezopolitiko ezizinzileyo kunye nezoqoqosho eziphuculwe ngezoqoqosho aziyi kuba nefuthe elikhulu ekufuneni umsebenzi kwaye ziphule i-visa yazo ngelixa e-US, ingozi leyo i-consul ucinga ngokuvuma okanye ukuphika i-visa. Sirayeli ayifakwanga kwi-VWP ekwabiweyo ngenxalenye ngenxa yokuhlolisiswa kwayo AmaPerestina aseMerika ahamba e-Israel, ngaloo ndlela ayizalisekanga imfuno yokubambisana.
The udibano lwaseyurophu Uphoxelele iUnited States ukunyusa iNkqubo yokuLungiselelwa kweVisa kumazwe alo angamahlanu asele angabikho kulo: EBulgaria, eCroatia, eCyprus, ePoland, kwaye Romaniya. Zonke ezi zi "mazwe emephu yemephu" ngaphandle Khroweyishiya, esanda kujoyina i-EU kwi-2013. NgoNovemba 2014 Urhulumente waseBulgaria ivakalise ukuba ayiyi kuvumelana noTyatlantic Trade and Investment Partnership ngaphandle kokuba iUnited States iphakamise iifowuni kubemi bayo.
Ngaba abahlali baseYurophu bafuna iVisa kwi-USA?
Ngabemi baseBrithani uhamba ngokusemthethweni, umatshini ngamnye ofundekayo okanye ipasipoti, kunye nokubuya okanye ithikithi phambili, kwaye ngubani ohlala phantsi kweentsuku ze-90, afanelekele Programme Waiver Programme kwaye unakho visa yokuhamba-idlala kuphela Inkqubo ye-elekthroniki yokuVunyelwa kweeNdwendwe (i-ESTA).
Ngaba abahlali base-US badinga i-visa ye-EU ukungena eYurophu? Abemi baseUnited States abaneepasipoti esebenzayo yase-US bangahamba Amazwe angamazwe aseYurophu angama-26 Indawo yeSchengen yeentsuku ezili-90 ngaphandle kokufaka isicelo okanye ukufumana iSchengen i-visa yezokhenketho zangexeshana okanye uhambo loshishino.
Ukutyelela abathandiweyo, okanye ukuza kwiholide eMelika? Kufuneka ufumane imvume egunyazisiweyo kwi-Government of United States ngaphambi kokungena kweli lizwe. Kwezinye iimeko, oku kuthetha ukufaka isicelo se-visa kodwa ukuba ungummi welizwe elibandakanyiweyo Programme Waiver Programme (VWP), usebenzisa Inkqubo ye-elekthroniki yokuGunyazisa uhambo (i-ESTA) inokuba yindlela elula kwaye ekhawulezayo.
Ngaba i-ESTA iqinisekisile ukuhamba ngeendidi ezininzi?
akho ESTA ugunyaziso ngokubanzi ivumelekile ukuhamba ezininzi ngaphezulu kwexesha leminyaka emibini (ukuqala umhla ovunyelweyo) okanye de iipasipoti zakho ziphelile, nantoni na kuqala kuqala *. Oku kuthetha ukuba nje kuphela xa ufumene ESTA ugunyazisiweyo hamba, akudingeki usebenzise kwakhona ngexesha sekile ixesha. Iimfuno ze-EST phantsi kwe-VWP ye-Visa Waiver Programme ayimfuneko kakhulu kunezo zicelo zekhompyutha ezingabonakaliyo. Isicelo seVisa sidinga malunga neyure enye okanye ixesha elide ukuzalisa yonke inkcazelo yokuhamba kunye neembali malunga nawe kwaye kufuneka ulinde inyanga ngaphambi kokuba uvumeleke. Vs. i Sicelo se-ESTA malunga nemizuzu ye-10.
Ingakanani i-ESTA Indleko?
Ukusebenzisa ukuhlaziywa kunye neenkonzo zokucwangcisa i-$ 89.00 USD. Iindleko ziquka umrhumo weburhulumente we-US we-14 (malunga ne-£ 9) ngomntu ngamnye, kwaye kufuneka ahlawulwe ngekhadi lekhredithi. Ukuba isicelo sakho sinqatshiwe, iindleko ze-4 kuphela. (Iechazwe kuMthetho wokuKhuthazwa koThutho, i-2009)
Yintoni eyenzekayo Ukuba i-ESTA yakho ityala?
Ukuba umhambi uyalelwa ukugunyazwa kwe-ESTA kunye nezimo zakhe azitshintshi, isicelo esitsha siya kunqatshelwa. Umhambi ongafanelekanga kwi-ESTA akavumelekanga ukuhamba phantsi kwe-Visa Waiver Programme kwaye kufuneka afake isicelo se-visa engekho mmiqathango kwi-a US Embassy okanye Consulate.
Kuthatha ixesha elide ukuthatha i-ESTA?
An Isicelo se-ESTA malunga ne-10) ifom yeshumi elinesibini kwaye iqhutywe kwangoko kwikhompyutha. Uninzi lwezicelo zivunyiwe zingakapheli umzuzu wokungeniswa. Nangona kunjalo, kukho imeko apho isigqibo kwisicelo sinokulibaziseka Iiyure ze72. Yingakho kuba neprojekthi yokuphonononga isicelo sakho yinto efanelekileyo kakhulu. Zonke iziphakamiso zihlawulwa kakhulu ngekhadi lesikweletu. I-ESTAmerica inokuthatha enye inkokhelo yokuhlawula i-United States yaseMelika ayikho ngaphandle.
Qalisa isicelo sakho Namhlanje
Qalisa iihambo zakho kwiiyure ze-72
Faka isicelo ngoku
Sinika i-E-F eFayile yePaspoti isicelo esheshayo kunye esilula. Vumela indlela yethu yokufakela i-E inxaxheba kwimibandela efunekayo kwaye iqela lethu liza kuhlolisisa isicelo sakho ngaphambi kokuyithumela kwiSebe laseMelika laseMelika. I-ESTAmerica ibhalisiwe kwinkampani ngaphakathi eUnited States.
Hlalani kwi-loop xa kukho ukuhlaziywa kwemimiselo ye-ESTA, Sithumela i-imeyile ukuze sikuxelele ngamazwe kunye ne-Visa Waiver Programme.
Iinkqubo zokuhlawula i-E-Filing Payment
ESTAmerica iyinkampani yokuhamba yeqela lesithathu Inkonzo yabaxumi be-24 / 7.
AsinguRhulumente WeeUnited States okanye amaGosa eDolophu yeeMida.
I-Copyright 2020 © ESTAmerica.org